Indlela ukupheka iklabishi imiqulu in multivariate? Kwabaningi, lesi sidlo sibonakala siyingqayizivele, ngoba omama bakipheka epanini elingaphakathi. Kunzima ukucabanga ukuthi idivayisi ekhishi ephelele yendawo yonke, njenge-multitivarker, ingasiza ukwenza iklabishi evulekile. Phakathi naleso sikhathi, ubuchwepheshe buhlukile ngokujwayelekile. Ake sibone ukuthi singakwenza kanjani iklabishi inqwaba. Khonza lesi sidlo esimnandi sinconywa ngosawoti omuncu noma nge-sauce esekelwe kuso.
Indlela ukupheka iklabishi imiqulu in multivariate? Ukukhethwa kwenyama nemifino
Lesi sidlo esinomsoco, esilula futhi esihle siqala ngokukhetha inyama efanele. Yiqiniso, ungathenga inyama enobisi esilungisiwe esitolo. Kodwa uma ukhetha ucezu olunomsoco wenkomo noma ingulube (futhi kungcono ukupheka kusuka ezinhlotsheni ezimbili zenyama enamafutha aphakathi) bese uwugaya endaweni yokugcoba inyama noma ngommese, iklabishi yakho iguqulwa ku-"Redmond-M70" yama-multilayer iyoba yingxenye yangempela yobuciko be-culinary. Ngendlela, iresiphi ye-mince engezansi iphelele ukugxilisa uphepele oqoshiwe. Iklabishi yokukhetha iklabishi isigaba esibalulekile sokulungiselela. Kumele kube mncane, i-oblong (khona-ke amaqabunga azoba nesimo esihle, azoba lula ukuwafaka). Iklabishi yasehlobo ayikakulungeli kahle ukulungiselela imigqa yeklabishi ku-Panasonic-18 multivariate. Kodwa uma kungekho okukhethwa kukho, khona-ke ungayithatha, unciphise isikhathi sokucima. Iklabishi yasebusika, ngokuphambene nalokho, inzima. Kuyo, kungase kudingeke ukuba unqume izingxenye ezinzima kakhulu. Khona-ke lidilizwa ngamaqabunga futhi abilisiwe. Ungaphinda upheke ngekhanda lonke noma ufake isikhathi esifushane kwi-oven microwave ukuya kwimodi ethi "Defrost". Emva kwalokhu, ngeke kube nzima ukuhlukanisa amashidi.
Indlela ukupheka iklabishi imiqulu in multivariate. Siqhubeka nokucubungula imikhiqizo
Ngenkathi iklabishi ibilisiwe, hlanganisa inyama eqoshiwe (izinhlamvu eziyizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu) ngezinongo zakho ozithandayo (pepper, coriander, cumin, paprika), enye i-onion bulb kanye nengxenye ingilazi yelayisi. Ngokuqondene nokuthi irayisi engabeka emagqabhagwini, kukhona imibono ehlukene. Abanye abesimame bafaka okuluhlaza-kulokhu, isikhathi sokupheka sizokhula, futhi kuyodingeka ukuthi sicabange ukuthi le nkomazi ngesikhathi sokupheka inamanzi amaningi futhi ingenza isitsha sakho some futhi sicele. Ngakho-ke, kungcono ukubeka ilayisi, okuphambi kokupheka kuze kufike isigamu esiphekwe. Usawoti i-mince, uthathe isanqante encane kuyo, ubeke i-garlic eqoshiwe (noma ngabe yikuphi ukucindezelwa). Gcoba ukugcwaliswa okulungiselelwe emaqabunga eklabishi, uqiniseke ukuthi abaqedi ngesikhathi sokucubungula okuqhubekayo. Ngaphambi kokuba ulungiselele imigqa yeklabishi ku-multivark, gazinga u-anyanisi owodwa nenye isanqante esimweni se- "Baking" esitsheni. Kuthatha cishe imizuzu eyishumi nanhlanu. Khona-ke udinga ukubeka izinkezo ezimbalwa zika-utamatisi bese upheka ezinye imizuzu emihlanu. Faka ama-klabishi olungiselelwe esitsheni, uwafake ngamanzi (uketshezi kufanele uwafake ngokuphelele), usethe uhulumeni we-"Quenching" ngehora nengxenye noma ihora, kuye ngokuthi isimo seklabishi. Isitsha kufanele senziwe sishise. Imiqulu yeklabishi evilaphayo ilungiswa kusuka kusethi efanayo yemikhiqizo, inyama kuphela enobuthi ayifakwa eklabishi. Esikhundleni salokho, i-shredded futhi ixubene nenyama. Isitsha esenziwe ngomumo sifana neklabishi elitshisiwe ngenyama enobuthi.
Indlela yokupheka amantongomane ngobisi oluncibilikile
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe susa i-akhawunti "Ofunda nabo '?
Eseyintsha Original - Wedding Dress-transformer
Ushizi namakhekhe - alternative engasindi ukuze bhisikidi.
Kwangathi amandla angena nawe! Kukhona izicathulo kubalandeli be "Star Wars"